Makiyi ekutarisana nemari usati wasvika zhizha | Ehupfumi Zvemari
Makiyi ekutarisana nemari usati wasvika zhizha
Zhizha zvirokwazvo mwaka wakaomarara wekuenzana misika yemari yezvikonzero zvakasiyana izvo isu zvatichatsanangura pazasi. Saka kuti iwe ugone kunyatso shandisa yako inotevera portfolio yemasecurity sezvo ichifanira kuve atypical kupfuura dzimwe nguva dzegore. Mumwedzi mishoma idzo setsika dzave dzakaipa kwazvo kumabhegi kwemakore mazhinji. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei zviito zvako zvichifanira kutungamirwa neyakajairika pfungwa uye mutoro wesarudzo dzako.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti isu takatanga kubva pachinzvimbo chakasimba kwazvo mumisika yemari. Sezvo iri kufungidzira iripo kugadziriswa kwemutengo muzviito kugadzirisa mutemo wekupa uye kudiwa. Hazvishamise kuti pane imwe ongororo pachinhu ichi uye inogona kugadziriswa chero nguva uye hazviite kuti mamiriro ezvinhu aya anogona kuitika mumwedzi yezhizha. Naizvozvo, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekugadzirira chiitiko ichi chakakosha.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti mumwedzi iyi huwandu hwekushandirwa hunodzikira nekusimba kukuru. Chinhu chinokonzera iyo mutengo kusagadzikana yezviito uye izvo zvinokonzeresa kuti njodzi dzakurisa kune zvinzvimbo zvevashambadzi vadiki nepakati. Kusimbirira kuti mutsauko uripakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma inogona kuwedzerwa. Chiitiko chisingaitike mune mimwe mwedzi yegore, kuitira kuti pakupedzisira kufamba kwacho kuve kwakanyanya kubva kune ese maonero maonero. Iko kukanganisa kunowanzo kuwanda kupfuura kunoitwa nevamiriri vese muchikamu cheyeti.
1 Zhizha, chii chatingaite?
2 Tenga kuchengetedzwa kwekudzivirira
3 Sarudza zvimwe zvemari zvinhu
4 Bheja pazvinhu zvinopesana
Zhizha, chii chatingaite?
Takatarisana nemamiriro ezvinhu akasarudzika anokura mumwedzi yezhizha, nzira dzakasiyana dzekudyara dzinogona kuiswa. Mumwe wavo inopfuura nekusarudza kukwana kwemari muaccount yazvino yevatengesi vadiki nepakati. Nechinangwa chekutanga chekuchengetedza yako wega kana yemhuri capital uye uchidzivirira chero rudzi rwekuvuza kungakushamise iwe mumwedzi iyi yegore. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuve uchinyatso kuziva nezve shanduko yemitengo yezvikamu zvisati zvaitika mukati memazuva ano.
Liquidity zano ratinogona kutora chete nenzira yakasarudzika uye kusvikira kudzoka kwemazororo. Kwatichazokwanisa kuita mashandiro mumusika wemasheya senguva dzose uye pamwe nemitengo yemastock yakaomesesa inogona kuitika mumadonhwe anoonekwa mukukosheswa kwemakambani akanyorwa. Kubva pane ino maonero kunogona kuve kushanda kunobatsira kwazvo kune kwedu zvido zvine hukama nenyika inogara yakaoma yemari.
Tenga kuchengetedzwa kwekudzivirira
Imwe yemaitiro atinogona kushandisa mumwedzi yezhizha ndeyokusarudza hunhu hunochengetedza kana hunochengetedza hwesarudzo inosarudzika yemari yenyika, Ibex 35. Nenzira iyi, tichava mumamiriro akanakisa chengetedza mari yedu takatarisana nezviitiko zvakashata zvakanyanya zvekudyara. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti mitengo yavo inoratidza kusagadzikana kukuru mukuchinja kwemitengo. Inomiririrwa nemitengo yezvikamu zvinoenderana nemagetsi kana chikafu.
Kune rimwe divi, ivo kazhinji vanokoshesa izvo govera zvikamu pakati pevachagovana navo uye izvo zvinopa kukwirisa kwakakura kune iyoazvino account yeadiki nepakati varimi. Nebatsiro rinofamba mune imwe nhanho inoenda kubva ku3% uye kusvika ku8%. Kuburikidza nemubhadharo paakaundi iyo yakatarwa uye inovimbiswa gore rega rega. Zvisinei nekushanduka kwayo mumisika yemari. Kuve mune chero ipi nzira zano rekudyara iro rakanangana nevakawanda vanoita zvechivanhu.
Sarudza zvimwe zvemari zvinhu
Ehe, haugone kutonga kunze kunongedza mimwe misika uye zviwanikwa zvemari senzira yekudyara. Semuenzaniso, ndizvo zvinoitika nemisika yemari yakatarwa iyo yechokwadi inopa imwechete chete shoma purofiti yakatenderedza 1%. Asi izvo zvirinani zvinobatsira kuchengetedza zvese zvatakachengeta uye kuti hapana euro icharasika mumipiro yemari yakaitwa kubva pazano iri mukudyara kwakachengetedza Hazvishamisi kuti njodzi dzakanyanya kushomeka nekuti kuratidzwa kwako hakusi.
Kune rimwe divi, imwe sarudzo inomiririrwa nedzimwe nzira dzekudyara. Sezvazvinoitika mu mbishi zvigadzirwa, simbi dzakakosha nezvimwe zvinhu zvemari yechikamu ichi. Kunyangwe muchiitiko ichi, ivo vanonyanya kufunga nezve njodzi dzekuita kwavo. Asi mune dzazvino, vanogona kuve mukana webhizinesi nekuti vane mukana wakakura wekutenda, kunyanya goridhe inoratidza yakanakisa yehunyanzvi chimiro. Nezvinhu zvese zvinogara zvichikwira kumusoro uye izvo zvinogona kuve musoro wekutenga nevatengesi.
Bheja pazvinhu zvinopesana
Kana iwe uchifunga kuti musika wemasheya unozodonha mumwedzi yezhizha, unogona kusendamira parudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari. Asi uchifunga izvozvo unotora njodzi dzakakura Kana aya mamiriro asina kusangana uye izvo zvinogona kukonzeresa kukudziridzwa kukuru kwekuwongorora uko kunogona kuyera upfumi hwako munguva ino yegore. Uye saka chichava chisarudzo chakanyanya kufunga nekuda kwechimiro cherudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari.
Iwo mamodheru ekudyara maunogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete, ichikusiira iwe chikamu chakanaka chemari yakachengetwa. Nepo kune rimwe divi, iwe zvakare unofanirwa kugara uchifunga kuti izvi zvigadzirwa ndizvo zvinoratidzira yakakwira mwero wekuwedzera nekuda kwavo chaiwo hunhu. Hazvina kukodzera kwazvo kune ese profiles ayo madiki nepakati varimi varipo. Beyond mamwe akateedzana ezvehunyanzvi kufunga. Kuve chimwe chezvinyanyo kuzivikanwa zviratidzo zveizvi zvigadzirwa zvekudyara izvo zvakaomarara sezvo zviri zvitsva panguva imwe chete. Icho chinhu chatinofanira kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Makiyi ekutarisana nemari usati wasvika zhizha
Divergences: mabhangi vs magetsi
6 makiyi ekuvandudza mari